Kedu ka m ga esi edozi njehie 0x80a4001a na Xbox one? - Xbox
Isi > Xbox > 0x80072f8f xbox one - nzaghachi nye nsogbu
0x80072f8f xbox one - nzaghachi nye nsogbu
Kedu ka m ga esi edozi njehie 0x80a4001a na Xbox one?
Njehie 0x80a4001ana-eme mgbe a kpaliri gị maka paswọọdụ gị
Gaa na Sistemụ> Ntọala> Akaụntụ> Wepụ akaụntụ.
Họrọ akaụntụ ịchọrọ iwepụ ma họrọ Wepụ.
Họrọ Banye, wee tinye akaụntụ gị ọzọ wee tinye paswọọdụ gị.
Họrọ ma Onweghị ihe mgbochi ma ọ bụ Jụọ maka akara m.
Gịnị mere m Xbox glitching?
Dị ka ngwaọrụ ọ bụla dị elu na teknụzụ,XboxOtu nwere ike mgbe ụfọdụ lag, ifriizi, ma ọ bụ na-enwe ndị ọzọglitches. Enwere ike ibute nsogbu ndị a site na bulite ngwanrọ ọhụụ ma ọ bụ site na oge iji ogologo oge. Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ nsogbu ndị dị otú ahụ na-emezigharị site na ịmalitegharia ngwa ngwa ma ọ bụ tọgharịa.Sep 13 2019
na-eche ebe a ma ọ bụrụ na ị nọ ebe a, ọ bụ n'ihi na ị nwere ike ịnwe nsogbu ihu ojii a Enweghị nsogbu ọ bụla na-ewute m na m na-egwu egwu m Scorpio kemgbe ọ malitere na nke a malitere ịkpọ agha nke oge a na July 2020 iji kpọọ onye omekome ahụ. na-ewe oke iwe banyere ya ma Microsoft anaghị ekweta na nke a bụ nnukwu nsogbu na-ewe oke iwe banyere ya, mana m mere ihe m kpọrọ anxbox doctoron ebay.
Ee, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị itoolu na mbupu ya na m na-agba ọsọ Scorpio ihe dị ka otu elekere ugbu a taa, Fraịde Septemba 25, 2020 Obi dị m ụtọ ịkọ na enweghị ọkụ ọ bụla, m ga-egosi ọbụna na ọ bụ na 4k na arụ ọrụ hduh hdr gosipụtara. Nke a dị na Samsung 65inch nwoke a ga-enweteworị oge 10-15 n'oge a na ihe dị ịtụnanya gbasara m? Ọ ga-esiri m ike ịnwe nsogbu a na Sony 49-inch TV, n'ihi ya amaghị m ma ọ dị m n'ihu. Echere m na ọ bụ aka, ma ọ bụ nsogbu ọ bụ gị mgbawa mgbapụta ma ọ bụ hdmi portum enwere m agha ọgbara ọhụrụ enweghị nsogbu ọ bụla ma enwere m obi ụtọ na nke a bụ nke mbụ gafere ọzọ youtuber geostomp, ebe o kwuru nwee otu nsogbu ahụ ọ chọtara mmadụ na ebay uh ryan na nke ahụ bụ fella ideed m tinyekwara nkọwa gbasara ryan n'okpuru.
rwad3472 bụ ya eBay ID ma m na-aga na-agụnye a nkọwa n'okpuru ya mere ọ ihu ọma dochie retimer mgbawa na m ka ya mee HDMI n'ọdụ ụgbọ mmiri maka mmezi $ 10 tufuo obi abụọ ọ bụla na m nnọọ ibu obi ụtọ, m ọ bụrụ na achọpụtara m ya ma mee ya n'oge na-adịghị anya n'ihi na m mechara zụta ihe ntanetị cyberpunkuh na ebay maka ihe karịrị 400. Ya mere, Xbox bụ ụdị ntụrụndụ m kachasị mma n'ihi na ọ bụ naanị ihe m ga - achọ ka ọkachamara nweta karịa ka ị maara, were oge iji dozie ya n'onwe m, etinyegoro m ihe eletrọniki na igodo egwu na mbụ na ndị dị otú ahụ, mana achọghị m ijikọ na anxbox soum oge ọ ga-ewe iji nweta nke ahụ gbakwunyere ụgwọ nke mgbawa ngwaọrụ gị choro iko di elu, egbe ikuku di oku ee ryan emeela ka otutu mmadu na nar i ha nile banye na nzaghachi 100, ya mere ka anyi mara ka anyi mee onye mere otutu nke ya, oge mgbanwe site na inata ya iji weghachite ya na mail bu ụbọchị anọ mgbe ọ natara ya na Tọzdee ma ekwere m na m nwetara Em Ọ bụrụ na ọ bụ Mọnde ma ọ bụ Tuzdee n'izu a ka m nwetara ya taa na Septemba 25th 2020 nnukwu obi ụtọ ọzọ na-atụ anya na onye a na-enyere mmadụ aka karịa iwepụta oge iji go nna nna nna iji dozie dọkịta Xbox maka gị. Obi dị m 100% obi ụtọ, nke a bụ nyocha m na-achọghị, daalụ maka ile anya ma nwee olile anya na ọ ga-enyere gị aka
Kedu ụdị Xbox dị ugbu a?
Usoro Xbox X
Microsoft pụtara n'ahịa egwuregwu njikwa egwuregwu na Xbox console na 2001.
Nke a bụ ihe njikwa mbụ emere maka ụwa brọdbandị, jikọtara ya na igwe nrụpụta dị ike na draịva siri ike 8 GB na Nvidia GPU dabere na usoro GeForce 3 nke eserese eserese na ọdụ Ethernet. Ọzọkwa wepụtara na 2002 bụ Xbox Live, ọrụ njikwa kọntaktị egwuregwu mbụ n'ịntanetị nke mere ka ndị na-egwu egwuregwu soro egwuregwu ndị ọzọ na egwuregwu ndị ọzọ, nke mere Xbox nnukwu ewu ewu. Egwuregwu ndị kachasị ewu ewu maka Xbox bụ Halo: Combat Evolved, Project Gotham Racing na Nwụrụ Anwụ ma ọ bụ Ndụ 3.
Ihe egwuregwu egwuregwu nke abụọ nke Microsoft malitere bụ Xbox 360 console na 2005. Ihe njikwa ahụ nwere nhazi ngwaike nke dabere na atọ atọ -Six-thread CPU nwere ọsọ ọsọ nke 3.2 GHz, ATI Xenos graphics card with 500 MHz and 512 MB nke GDDR3 RAM ebe nchekwa.
N'agbanyeghị nhazi ya, Xbox 360 nwere ọtụtụ ngwaike ngwaike n'ihi oke ekpo oke ọkụ. Igwe ọkụ uhie atọ ahụ akpọrọ 'Red Ring of Death' bụ nnukwu nsogbu nye ndị ọrụ dugara Microsoft ịgbatị Akwụkwọ ikike Console bụ Afọ 3. Akwụkwọ ikike njikwa bụ afọ atọ Xbox Xbox Elite wepụtara na 2007 maka $ 479.99.
O nwere matte oji zuru oke na draịvụ ike 120GB. Emepụtara ụdị arcade ahụ na mbubreyo 2007 ma bu n'obi dochie ụdị Xbox Core. Ihe njikwa a enweghị draịvụ ike, kama o nwere kaadị ebe nchekwa 256MB yana ọdụ ụgbọ mmiri HDMI.
Na 2010 Microsoft weputara Xbox 360S, ihe ohuru na nke edeputara nke Xbox 360. Ngwunye ohuru ahu di nma, nwecha ocha nke oma, ma obu ngwaike nke Xbox 360. Agbanyeghị, Xbox 360S nwere draịva 250GB, nwere WiFi arụnyere, mmepụta igwe eji arụ ọrụ, ọdụ ụgbọ USB USB 2.0 na ọdụ ụgbọ mmiri pụrụ iche maka Kinect.
Ejiri Xbox 360E bidoro n’afọ 2013. Ọ pere mpe ma fechaa karịa Xbox 360, atụmatụ ya yikwara Xbox One. Ejiri Xbox 360 E nke nwere ọdụ ụgbọ USB abụọ, Ethernet, nkwado Wi-Fi na ọdụ ụgbọ mmiri maka Kinect.
Excel ndokwa niile
Onye nọchiri na Xbox 360 console bụ ụdị Xbox One, nke ewepụtara na 2013 ma lekwasịrị anya na Kinect sistemụ yana mwekota nke telivishọn n'ime ngwa agbakwunyere yana iwu olu. Na usoro nke imewe, na Xbox One nwere a abụọ-ụda Chassis, matte nwa na a kenkowaputa imecha na nwere capacitive aka bọtịnụ ọzọ. N’afọ 2016, Microsoft wepụtara Xbox One S, ihe njikwa ọhụrụ ruru 40% pere mpe karịa nke mbụ, Xbox One.
Versiondị a nwere bọtịnụ anụ ahụ, ọdụ ụgbọ USB na bọtịnụ mmekọrịta dị ugbu a n'ihu ihe njikwa ahụ ma gbakwunye 4K Blu-ray draịva yana nkwado High Dynamic Range (HDR). Na mgbakwunye, Xbox One S bụ Xbox izizi kemgbe Xbox izizi iji gosipụta ike ọkụ na-arụkọ ọrụ kama ị nweta ike mpụga. Na 2017, Microsoft wepụtara Xbox Microsoft One X, nke mbụ Xbox console iji nye egwuregwu 4K na 60 FPS.
The console bụ ugbu a kasị ike console na ụwa. O nwere 8-isi AMD processor, 12 GB nke GDDR5 RAM, na-eji AMD Polaris Six Teraflop eserese kaadị na 1,172 MHz na 1 TB nke ebe nchekwa. Ihe njikwa nke anọ na usoro Xbox One bụ Xbox One S Digital Edition, nke malitere na 2019.
Buy Xbox na-eso ụzọ
O nwere ihe yiri nke a na Xbox One S mana onweghi disk diski. Ihe njikwa ahụ bịara na otu njikwa ikuku na egwuregwu GamesMinecraft atọ, Oké Osimiri nke ndị ohi, na Forza Horizon 3. Ihe ngosi Xbox kachasị ọhụrụ bụ ụdị Xbox Series X, na-ebido oge ezumike nke afọ a.
Ọ na-akwado mkpebi ruo 8K na na 4K ọ ga-agba ọsọ ruo 120 okpokolo agba kwa nke abụọ ruo 60fps na Xbox One X ma nwee ọtụtụ ọrụ ọhụụ dịka: Nchekwa SSD, nke na-enyere egwuregwu ka mma, ụwa egwuregwu ka ukwuu na ngwa ngwa. Oge nkwụnye ụgwọ, ezigbo oge -Raytracing, malitegharịa ngwa ngwa, nke a na-enye ohere iji ọtụtụ egwuregwu na ngwa egwu akpọchiri ozugbo dị ka ndị dị na windows.HDMI 2.1 na ndị ọzọ.
Nke ahụ niile. Echefula ka anyị mara na ihe Xbox console ị na-eji na nke bụ egwuregwu kachasị amasị gị na Xbox, lee gị n'isiokwu na-esonụ!
Kedu ihe njehie 0x800772f8f pụtara na Xbox Live?
Mperi koodu 0x80072f8f ahụ pụtara ma ọ bụrụ na ijikọ na Xbox Live ada ada. Iji dozie esemokwu a, regharịa ngwaọrụ netwọkụ gị. Ọmụmaatụ, Malitegharịa ekwentị gị rawụta ma ọ bụ ọnụ ụzọ ámá. Pịa bọtịnụ Xbox ka imepe ntuziaka. Pịgharịa gaa na Ntọala ma họrọ Ntọala niile. N'okpuru Network, họrọ Network Settings.
Kedu ihe bụ koodu njehie 0x800772ff na Windows 10?
Windows nwere onye arụ-nsogbu na-enye nsogbu iji nyere aka dozie njehie ndị nkịtị na akpaghị aka, dịka koodu njehie 0x80072F8F. Mgbe ị na-ezute ngwa ndị na-agaghị ebudata, mepee, melite, ma ọ bụ wụnye, ịnwere ike iji Windows Apps nchọpụta nsogbu iji dozie nsogbu ndị a. Iji mee ka onye na-ahụ nsogbu anya, soro usoro ndị a: Mwepụta Ogwe njikwa ma pịa Sistem na Nche.
Etu esi emeso koodu njehie Storelọ Ahịa Microsoft 0x80077f8f?
Rorlọ Ọrụ Njehie Storelọ Ahịa Microsoft 0x80072F8F 1 Lelee Oge Kọmputa Gị na Datebọchị. 2 Gbaa Windows Store Apps Troubleshooter. 3 Tọgharịa Storelọ Ahịa Microsoft. 4 Gbaa sistemụ Check Check System. 5 Weghachi Storelọ Ahịa Microsoft. Lee More ....
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na Xbox One na-ekwu network network?
Enwekwara ọtụtụ bọtịnụ, nwaa ọzọ, woo, lelee njikọ, gbanyụọ Xbox. Enyochala m njikọ ịntanetị, ọ dị mma. Enwere m ike ịwụli ma banye na menu, mana mgbe m gbalịrị ime ka njikọ netwọk nwee ike ịhụ otu njehie ahụ. M na-agbalị ime ka console nrụpụta, ma ọnọdụ bụ otu ihe.